Mageia 2 yakaburitswa | Kubva kuLinux
Mageia 2 yaburitswa
naPerseus | | Kugoverwa, GNU / Linux, Noticias
Nedzimwe njere uye mukutevera zuva rekuburitsa, rakaburitswa mashiripiti 2, forogo yeMandriva. Iyi vhezheni itsva inosanganisira mamiriro edesktop:
Uye mamaneja emahwindo akasiyana akadai se:
Pakati pezvishandiso zvakanakisa zvatinowana
Firefox neThunderbird ESR (Yakawedzerwa Rutsigiro Rinoburitswa 10.0.4)
Iyo zvakare ine iyo Linux kernel 3.3.6.
Kuti utore mifananidzo ISO ingo tevera chinongedzo pazasi: Dhawunirodha Mageia 2. Makorokoto Mageia nekuburitsa kukuru uku;).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Mageia 2 yaburitswa
Mira… RazorQt? Iyo yakazara desktop? OO Zvikasadaro, ini ndinotora iyo vhezheni neLXDE, iyo yakandinakira chaizvo.
Ndizvozvo, zadzisa 😉
Ini ndaifunga kuti yanga isati yakwana zvachose, kurodha pasi kuti uyedze ... Ndinoona kuti hapana shanduro dzakatsaurwa, saka ini ndicha download kana Gnome kana KDE ndinofungidzira ...?
Ndakagara zvakadaro ... ndinofunga zvakakosha kukosha zvishoma 😀
bvunza, razor-qt inouya neaiwwm kana openbox, kana ichiunza eggwm yakakodzera kuyedza
Pindura kuna Jesu
Izvo hazviunzi chimwe chevaviri, unogona kushandisa chero Window Manager, kunyangwe ichiwanzoshandiswa neOpenbox, Compiz uye KWin.
ndezvekuti ini ndanga ndanzwisisa kuti razor-qt inoperekedzwa nezawm (iri zvakare mu qt) asi parizvino inofambidzana nebhokisi rakavhurika (iyo isiri imwe nzira yakaipa)
Iyo inogona zvakare kumhanyiswa pamusoro mutter (Gnome)
Razor-Qt yakafanana nehutachiona, inonamira kune zvese xD
Pindura kuna nano
Ndiri kuda kuyedza paChakra, asi ndinotya kukanganisa iyo system.
Izvo hazvizoitika kuti iwe hauchizvida uye ndokupa iyo sudo pacman -Rsn XD. Kunyanya, tenda kwandiri kuti hapana imwe nzira iri nani yekuyedza reza kupfuura mu chakra ;-), 0 messes uye yakachengeteka kwazvo.
Zvinoenderana neMageia blog iri Xfce 4.8.3.
Pakupedzisira yakabuda. 🙂
Pindura kune sieg84
Fuck veMageia vakomana, ini ndichangopedza kurodha pasi iyo fucking 4 GB iso ye mageia 1 uye ikozvino vabuda neshanduro yavanokupa, ndati, ndiri kugara nemandriva
Pindura kuna leonardopc1991
Unozvikwiza pachako, nekusave "unotonhorera" 😛
Pindura kuna Annubis
Kwete kwete ini handitonhorere ndinotaridza sePerseus bvunzo uye bvunzo distros
Pasina kuda kuburitsa murazvo, waitozviona here kuti pakuverenga kwemazuva manomwe ekupedzisira eDistroWatch, Mageia anoonekwa munzvimbo yechipiri? hehe, icho hachisi chinhu, mudiwa wangu Chakra ari munzvimbo yegumi nemana, kunyangwe ini ndisingatendi mukutendeka kwenzvimbo ino, kana ichidzidzisa kwazvo.
Pindura kuna Windóusico
Izvo vazhinji vakadzvanya paMageia xD link
Inodzidzisa kwazvo ipapo: P.
Chinhu chinoshamisa chingave chekuti chakange chisiri munzvimbo dzekutanga (verenga ichi chinyorwa kuti unzwisise kuti sei).
Izvo zvaive kuburikidza neDistroWatch iyo yandakadzidza nezve huwandu hukuru hwemastros aripo, uye hunhu hwavo. izvo zvakanditungamira kuti ndiedze zvimwe zvacho, zvimwe zvinonakidza, vamwe, mumaonero angu, njodzi !!!!! Hahaha
Kuziva kugoverwa kutsva iri peji hombe.
Ndakawana chinyorwa chakabatanidzwa kune chinongedzo chinotevera kwachiri chinonakidza kwazvo.
Ini ndinoona yako yekutaura ichinakidza kupfuura iyo noti ¬¬
rock and roll akadaro
Kunze kwekuda kuziva ndakaburitsa iyo mhenyu mifananidzo (iyo inongowanikwa munzvimbo dzegnome uye kde) uye, kushamisika kwangu -kuda kune izvo tarisiro dzakagadzirwa-, zvinotaridzika zvinotyisa. Rarama mifananidzo chete usamhanya. Iyo yekumba skrini inoratidza iyo system kutakura kuburikidza nekuonekwa kwemabhora ari mune mageia logo. Mushure memaminetsi anopfuura gumi madenderedzwa mashanu akaonekwa. Ini ndakati, "Ugh, pakupedzisira", asi kwete, nekuti mushure (ndakamirira imwe maminetsi gumi) hapana. Tafura yakafa.
Kuodza mwoyo kwakadini!
Pindura kune rockandroleo
Wakazvinyora here paUSB? kana zvirizvo, iwe unofanirwa kuzviita nemunyori wemifananidzo iyo ndeye openSUSE, Chakra uye Windows, nekuti ne Unetbootin zvirinani neMageia 1 haina kushanda neicho chishandiso.
Pindura kuna Curefox
Ini coupe, chaizvo, iyo unetboothin kuunza iwo mufananidzo kuUSB. Handina kufunga kuti iri ndiro dambudziko. Muchokwadi, ikozvino zvaunenge uchitaura nezvazvo, chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri chinguva chidiki apo ndaida kuyedza OpenSuse.
Kutenda yambiro. Iye zvino ndichaona kana paine mashandisiro ekunyora mufananidzo kubva kuDebian yangu.
Chokwadi, sezvavanokuudza kuti dambudziko rinouya nekuda kwenzira yekurekodha muUSB, unogona kuedza kushandisa imwe chirongwa cherudzi urwu senge multisystem kana zvakafanana, kana kungoita kune dd raira.
Kana munyori wemifananidzo kana chero chinhu, sekukuudza kwaRayonant:
dd if=fichero.iso of=/dev/sdX
Kutenda kune iyo dd rairo. Chokwadi ndechekuti ini ndaisachiziva nekuti ndakanga ndisina kuchikumbira, nekuti unetboothin yaigara ichindishandira zvakanaka.
PS: Mune yangu yapfuura komendi ini netsaona ndakadya akati wandei mavara. Pfungwa yacho yaive yekuti:
Ndakabata ... »
Pano dzidziso 😉
Ini ndinosimbisa kuti neiyo dd yekuraira iwe unogona kugadzira inorarama USB inomhanya zvakakwana.
Nenzira, yakanaka kwazvo uye yakabwinyiswa Mageia 2. Ini handina kuyedza zvakanyanya, asi zvinoratidza kuti vanoisa simba rakawanda mukugadzira yakanaka kwazvo kuvhura.
Ini ndakanyadziswawo sezvo ini ndaida kuyedza kunyangwe muhupenyu mode. Chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri, chete, ini handizive kana chiri chakanyanya, ini ndakanyora mufananidzo mupenyu pane yakajairwa CD uye hapana kana. Iyo sisitimu inotakura kusvika kuMageia logo uye zvadaro yafa. Ini ndanga ndakamirira hafu yeawa uye hapana, hazvina kuitika kubva ipapo.
Ini ndaifunga kuti mufananidzo washatiswa, asi ndichitarisa masvomhu acho aive akanaka. Ipapo ini ndakadzora mufananidzo asi neimwe nzvimbo yedesktop uye pandakatanga icho chinhu chimwe chete chakaitika. I checked the misprints ndikaita zvavanofunga ipapo asi hapana. Hapana.
Kana ndiko kutanga, magumo achazovei? Pane imwe nguva ichave ...
Chinhu chimwe chete ichocho chakaitika ndinofunga ichit neMageia 1… hatisati taedza Mageia 2 izvozvi.
Kutaura chokwadi, ini handina kuyedza Live chikamu, gadza zvakananga muVirtualBox :(.
Dzidza kuve Zen tenzi wemarkup
LDD: Puppy Linux 5.3.3 inowanikwa